केसिको बयान मेरो मुख हेर्नु पर्दैन म जेल जान तयार छु तर, पराजुलीमाथि छानविन हुनुपर्छ ~ Khabardari.com
केसिको बयान मेरो मुख हेर्नु पर्दैन म जेल जान तयार छु तर, पराजुलीमाथि छानविन हुनुपर्छ
डा. गोविन्द केसीले आफूलाई न्याय दिने हो भने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि छानविन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा भएको बहस सकिएको छ । र, आजै आदेश आउने बताइएको छ । बहसको अन्तिममा डा. केसीले आफ्नो वकिलमार्फत एक मिनेट समय मागेर बोलेका थिए ।
उनले ‘मेरो मुख हेर्नु पर्दैन, मेरो कुनै याचना पनि छैन । हिरासतमै राखे पनि राख्नुुस्’ भनेका छन् ।
डा. केसीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले भने, ‘मेरो मायाले छाड्नु पर्दैन । जहिलेसम्म उनले राजीनामा गर्दैन वा हटाइँदैन वा उनीमाथि छानविन हुँदैन, तबसम्म अनसन बस्छु, जेलमा भएपनि अनसन बस्छु भन्नु भएको छ ।
फौजदारी अपहेलना भएकाले कार्य हुनु नै पर्याप्त हुन्छ, यसमा कारबाहीका लागि मनसाय हेरिरहनु पर्दैन’, श्रेष्ठले केसीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउँदै भने, ‘डा. केसीका अभिव्यक्ति न्यायपालिविरुद्धमा छन्। उहाँलाई पूरै सजाय अर्थात् कानुन अनुसार सजाय हुनुपर्छ।’ श्रेष्ठले कानुनले तोके अनुसार डा. केसीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्नुपर्नेमा दाबी प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै सर्वोच्चकै पक्षबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले केसीले गिरोह भनेकाले सिंगो अदालतकै मान मर्दन भएको हुँदा केसीलाई कारबाही हुनै पर्ने दाबी गरे। ‘गिरोह भनेकाले सिंगो अदालतको मान मर्दन भएको छ’, खरेलले भने, ‘केसीले अदालतविरुद्ध यस्तो अभिव्यक्ति दिनु फौजदारी अपहेलना हो। कारबाही गर्नका निम्ति उनको कार्य नै पर्याप्त छ।’
त्यस्तै सर्वोच्चकै तर्फबाट बहसमा सहभागी हुँदै अर्का अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले न्याय प्रशासनको काममा दखल दिँदा अपहेलना हुने भन्दै केसीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे।
केसीका पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने प्रधानन्यायाधीशलाई नै ‘कीर्तै’मा कारबाही हुनुपर्ने बताए। उनले गोविन्द केसीलाई नभएर प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ आदेश जारी गर्नुपर्ने तर्क गरे। ‘प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई नै ‘कीर्ते’मा कारबाही गरिनुपर्छ’, अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘गोविन्द केसीलाई नभएर प्रधानन्यायाधीशलाई नै पक्राउ आदेश जारी गर्नुपर्छ।’